Maamulka Muqdisho oo Wajahaya Godoomin Siyaasadeed.
(Hadhwanaagnews) Tuesday, March 13, 2018 09:17:39
Docda kale Dowladda imaradka Carabta ayaa lafilayaa in ay talaabo Xanuun badan ka qaado Maamulka taagta daran ee Magaalada Muqdisho
Maamulka taagta daran ee Magaalada Muqdisho ayaa Wajahaya Godoomin Siyaasadeed kadib Markii ay Canbaareeyeen Heshiiskii Saddex geesoodka ah ee Somaliland, DP World iyo Ethiopia.
Maamulka Muqdisho oo Caadaystay Xiqdiga iyo Xaasidnimada Cadaawada ku dhisan ee ay had iyo goor kaga Soo horjeedaan #horumarka iyo #Nabadda Somaliland. Ayaa dhexdabaashay badwayn uuna ka bixikarin. Madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in Waxkasta oo ay Maamulka Muqdisho Sameeyo aanay waxba u dhimi doonin Heshiiska Maalgashiga dekeda Berbera.
talaabada imaradku qaadi doono waxaa ka mid ah jarid dhaqaalaha
ay siinjireen Ciidanka Muqdisho iyo joojinta passporta Somalia. oo Saamayn doona ganacsiga iyo Socdaalka Somalia.
Waxaa kale oo lafilayaa in Dowladda imaradka Carabta iyo dowladdaha kale khaliijku ay si buuxda u aqoonsadaan passporka Somaliland. Maalmaha Soo socda waxaa la saadaalinayaa in ay wax badan iska bedelaan juquraafiga Siyaasadeed ee geeska afrika. (geopolitical of horn of Africa).
Dhenkeeda Dowladda Ethiopia oo qayb ka ah Heshiiska Maalgashiga dekeda Berbera islamarkaana ah dowladda ugu Saamaynta wayn bariga afrika kana Masuul ah amniga inta baddan dowladda taagta daran ee Magaalada Muqdisho. ayaa aad ula yaabtay jar iska Xoornimada Maamulka taagta daran ee Magaalada Muqdisho. Waxaana lafilayaa talaabo an ka farxin doonin Muqdisho qaadidoonto.